Semalt: Konke Okufuneka Ukwazi Ngezixhobo Ezikhuselekileyo Zokhuseleko Lwe-Web kunye Neendlela Zokuziphepha
Ukwandiswa kweefayile ezijoliswe kwiifayile ezijoliswe kwiifayile kunokuba kusetyenziswe iMacInkqubo ngexesha elidluleyo lashiya i-teknoloji ye-teknoloji ebuza ngezizathu zesimo. Abaninzi bathi le nto ingaba ngenxa yamandlaMac xa abanye bebonile ngenxa yesibalo esikhulu sabasebenzisi be-Windows okwenza kube ngumsebenzi ovuzayo we-website ye-hackers.Ngelishwa, ukuthandwa kwe-Mac kuye kwenyuka kwinani lamaTrojans kunye ne-malware ehlobene kunye nokukwazi ukulimaza.
Igor Gamanenko, uMphathi woPhumelelo loMthengi iSemalt ,ligxininise imfuno yokukhusela kuphela iziphequluli kodwa kunye nezicelo zewebhu.
Imithombo yokuqhubela phambili abaqhubi bewebhu
Xa abasebenzisi banikela ulwazi lokugcina kwisiseko sakho seenkcukacha, balindeleukuba iya kuhlala iyimfihlo. Into engaziwayo kukuba i-hacker yewebhusayithi kwindawo ethile ikumba ngewebhusayithi yakho ifuna ukubuthakaiindawo zokusebenzisa - servicio de hosting y dominio peru. Ezo zinto zilandelayo zingakhuthaza iinjongo zabo.
Qinisekisa ubuchule babo kuluntu.
Ukulahlekelwa yinkampani yakho ngokutshatyalaliswa kwedatha.
Idatha yomsebenzisi wecala.
Landa ulwazi olubalulekileyo oluthengiswa kumarike omnyama. Kule meko,abayishiyi nayiphi na indlela kwaye baqhubeka bebenzakalisa ixesha elide.
Izizathu zokuba kutheni abahlaseli bewebhu bejolise kwisicelo
1. Ukubaluleka kuyona sizathu esiyinhloko. Xa wakha intanethi ephumelelayoindawo, kufuneka kubekho ukhuphiswano abaziva bephelelwe ngaphandle kwaye kufuneka benze nantoni na eyenzekayo ukuze bahlale befanelekileyo.
2. Izizathu zezopolitiko..Oku kuboniswa ngamaqela anjengeNgcacisoizizathu zokuhlaselwa oorhulumente kunye nemibutho yonqulo kufuneka zenze ingxelo.
3. Abasebenzi abathukutheleyo ngamanye amaxesha badibana kunye nabangaphandle ngenxa yokunganeliseki.
Uhlaselo oluphindaphindiweyo lokuhlaselwa
Kule meko, injongo yokuhlaselwa kwedatha kukuba, ukutshabalalisa okanye ukuguqulaulwazi lomsebenzisi. Ngokomzekelo, i-hacker yewebhusayithi ingakwazi ukulungelelanisa iziphumo zezimali zeenkampani kunye nokweba ulwazi olubalulekileyo lomthenginjengamanani ekhadi lamatyala.
2. Ukuhlaselwa kweSkripthi yeSayithi
Oku kuquka ukufakwa kwekhowudi enobungozi eyenza kwicala lexhoba.
3. Ukusasazwa kweNkunkuma yeeNkonzo
Oku kubandakanya ukuveliswa kwee-intanethi zee-IP ezijoliswe ekukhuseleni isayithi ngeendlela.Oku kwenza isayithi ihlawule okanye ayifumaneki ngexesha elithile.
4. Izixhobo zokuPhulwa kweeNdawo eziPhezulu
Umsebenzisi uphephelwa ukukhuphela ikhonkco okanye umfanekiso ngexesha leseshoni eqinisekisiweyoekwenzeni ukuhlaselwa ngonya.
Izindlela zokukhusela impahla kunye nabasebenzisi
Ngezicelo zewebhu zizungezwe ngabo bonke abakhubazeka ngasentla, akukho mthuthukisiangathanda ukubeka umngcipheko kwimigudu yakhe. Oku kwenza ukuba kuyimfuneko ukubandakanya amanyathelo okuthintela ukusuka kumanyathelo okuqala ukuya ekugqibela. Abanyeizisombululo zilungiswe kwimisebenzi ethile ngelixa ezinye zenziwa ngokuqhubekayo. Ukuphononongwa kwamakhowudi, ukukhangela kwabo kunye neenkqubo zokuzingela izigciwanekufuneka ukuba kwenziwe kwi-lifecycle yesicelo. Ukuba ukhangela izixazululo ezizodwa zokuzikhethela ongakhetha kuzo ekuphumezeni ukusetyenziswaI-CAPTCHAS, ukusetyenziswa kweenkqubo ezigcinwe kunye neerameters ezizenzekelayo okanye ukusebenzisa iWindows Firewall yoLwabiwo oluhlola kunye neebhlokohlaselwa.